/Blog/Gallery/I-Raw Proviron (i-Mesterolone) ekwakheni umzimba, isilinganiso, nomjikelezo
Posted on 01 / 25 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Ini Is Raw Proviron (Mesterolone)?
I-mesterolone ebomvu i-powder e-crystalline, emhlophe ephuzi futhi ayichithi emanzini. Iyaziwa ngegama layo lomkhiqizo, i-Proviron. I-Proviron ithebhulethi / iphilisi ngalinye liqukethe cishe i-25mg i-mesterolone eluhlaza powder.Ngokungafani nezinye i-steroids, i-Mesterolone eluhlaza ibukeka buthakathaka kakhulu noma ngisho nemisebenzi ye-anabolic. Ngenxa yalesi sizathu, akudluliselwa ku-an i-anabolic steroid. Kulawulwa ngomlomo ngakho-ke akukho injection ye-mesterolone.
Ukukhishwa kwe-Mesterolone ku-1934. Ilinganiselwe phakathi kwe-steroid endala esebenzisana eceleni kwe-Methyltestosterone ne-Testosterone Propionate eyakhiwe futhi isetshenziselwa ukwelashwa ku-1935 no-1937 ngokulandelana. I-testosterone propionate ne-Methyltestosterone zaziziwa ngenxa yomsebenzi wabo onamandla we-anabolic. I-Proviron yayibhekwa njenge-steroid ebuthakathaka ngakho-ke ukuthambekela kwayo akuzange kufinyeleleke kuqhathaniswa namanye ama-steroids amabili.
Njengoba i-Mesterolone (i-Proviron) ithathwa njengesidakamizwa sasendulo, izici zayo ezinhle zisavele zisesikhathini. Kuyinto imithi ephumelelayo kakhulu mayelana nokubekezelelana phakathi kwabasebenzisi nokuphepha. Endaweni yezokwelapha, i-Mesterolone (1424-00-6) lisetshenziselwa ukwelapha inhlalakahle encane kubantu asebekhulile abahlukunyezwa yi-lido, ukungabi nabantwana kanye namazinga aphansi e-androgen. Ingenye ye-anabolic steroids yomlomo engcono kakhulu.
Ezokwelapha, i-mesterolone (Proviron) yayisetshenziselwa ukulungisa ukungasebenzi. Nakuba ezinye i-androgenic noma i-anabolic steroids zivimbela i-gonadotropin ephazamisayo eyenza ukungabi nalutho kwesikhashana, i-Proviron, uma isetshenziswe kumasheshini ajwayelekile akuthinti amazinga ka-LH emzimbeni. Kodwa-ke, kuhle ukuthi hhayi ukuthi i-Proviron ayiphakamisi amazinga we-LH njengabantu abathile bakholelwa ukukholelwa. Ngokusho kocwaningo, i-Mesterolone ikhuthaza i-spermatogenesis kuma-testes ngokunikeza imiphumela ye-androgenic edingekayo kule nqubo.
I-Proviron steroid iyingqayizivele endleleni yayo kodwa ihlanganyela ezinye izici noWinstrol, Masteron no-Anavar. Ukusebenza okuhlakaniphile, i-Mesterolone ayisetshenziselwa ukukhulisa ubukhulu bemisipha. Noma kunjalo, idlala indima ebalulekile ngesikhathi sokujikeleza. Ukusetshenziswa kwalo kufanelekile ekunqumeni imijikelezo, nakuba, umsebenzi wayo uphinde uhlukile kule sigaba.
Ukukhwabanisa okwamanje kwenza i-Mesterolone ngaphansi kwegama lomkhiqizo, i-Proviron, emhlabeni jikelele. Kuthengiswa ngokusebenzisa amagama ahlukene, isibonelo, i-Asche neJenephar eJalimane ithengisa ngaphansi kwePririviron neVistimon ngokulandelanayo. I-Brown neBurke e-India bayithengisa ngaphansi kwegama Ukubuyisela. Ngokudabukisayo, i-Proviron ayikaze yamukelwa njengemithi kadokotela e-US
I-Raw Proviron (Mesterolone) Izici zeMikhali
I-Mesterolone is derived dihydrotestosterone ishintshwe ngokufakwa kweqembu le-methyl, i-1-methyl-dihydrotestosterone, kwi-1 yayost ikhabhoni. Ngenxa yalesi sizathu, lesi sidakamizwa asikho ukuhlukunyezwa kwe-hepatic ngakho-ke singenziwa ngomlomo. Phakathi kwe-oral anabolic steroids, i-Proviron ingomunye wabambalwa ngaphandle kwe-C17-alpha alkylated kodwa kunalokho ithwala iqembu le-methyl. I-Oral I-Primobolan iwela ngaphansi kwesigaba esifanayo ne-Proviron mayelana neqembu le-methyl. I-C17-aa steroids yomlomo ifaka ukuhlaziywa okuphezulu kuneProviron. Lokhu kuye kwathandeka ukuthandwa kukaProviron phakathi kwabagqugquzeli bokusebenza abakhuthazayo.
Uma kuqhathaniswa ne-testosterone, i-Mesterolone ithwala isilinganiso se-anabolic nesilinganiso se-androgenic se-100-150 kanye ne-30-40 ngokulandelanayo. Ama-Testosterone amazinga ku-100 esigabeni ngasinye. Ngisho nesilinganiso esiphezulu se-anabolic, i-Mesterolone ibonisa imisebenzi encane ye-anabolic kune-testosterone. Icala elifanayo liya eHalotestin elaziwa ngokulinganisa okuphezulu kwe-anabolic kodwa umsebenzi ophansi we-anabolic. Isilinganiso se-proviron sika-androgenic ngezinye izikhathi sinciphisa amazinga womsebenzi we-androgenic.
Njengoba kucatshangwe ngenhla, lesi sidakamizwa sibonisa izici ezingenabalulekile ze-anabolic ngaleyo ndlela ngokuvamile ebizwa ngokuthi i-androgenic steroid. Njengoba nje i-DHT, i-compound yomzali wayo, i-Proviron idiliziwe futhi ihlukaniswa ngamatabolite angasebenziyo ngokushesha ngokushesha izicubu zomzimba ziwuthathe. Lesi yisona sizathu esiyinhloko esenza kube nemisebenzi ebuthakathaka yama-anabolic.
I-enzyme i-3-hydroxysteroid dehydrogenase, ephezulu kakhulu emathisini e-muscle, ibopha i-dihydrotestosterone futhi iguqula ibe yinhlanganisela nemiphumela ye-zero anabolic. Ngakho-ke, i-Proviron iba i-steroid e-anabolic ebuthakathaka kakhulu. Amahemuhemu phakathi kwabalimi bomzimba ayenakho ukuthi ama-Proviron bars kanye ne-androgen receptors ezitholakala emasukeni amisipha okwenza imisebenzi yayo ye-anabolic ibe buthakathaka. Ngokwesayensi, akunjalo.
I-Mesterolone ihlanganisa ubuhlobo obuhle kakhulu bocansi lwe-Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), iphrotheni elizihlanganisa ne-anabolic steroids, njenge-testosterone, eyenza ingasebenzi. Uma i-Proviron isetshenziselwa kanye nezinye i-anabolic steroids, ikhulisa imiphumela nemisebenzi ye-anabolic steroids ngokusebenzisa le nqubo. Ekugcineni, i-testosterone eminingi ikhululekile ukwenza umsebenzi wayo emzimbeni.
I-Proviron ingaxhumana ne-enzyme eguqula i-testosterone ku-estrogen, eyaziwa nangokuthi i-aromatase enzyme. Le steroid ivimbela umsebenzi we-aromatase ngokuzibophezela ku-enzyme ye-aromatase ngakho-ke ukuvimbela imiphumela yecala ye-estrogenic. Imiphumela yaso anti-estrogenic kungenzeka ingabi namandla njengaleyo i-Aromatase Inhibitor, kodwa umphumela uyaphawuleka. Amazinga ancike kulohlobo lomjikelezo owenza umzimba.
Izinzuzo ezinkulu ze-Proviron (Mesterolone) ekwakheni umzimba (Kuyini i-Proviron?)
Izinzuzo zomjikelezo wokunyakaza
I-Proviron akuyona i-steroid eyinhloko esetshenziselwa izici zomzimba ngesikhathi imijikelezo ye-bulking. Abanye ngeke basebenzise ngisho nalapho bevala umjikelezo. Noma kunjalo, kufaka phakathi i-Proviron ku-stack, kusiza umakhi womzimba ukuthi aphumelele iphuzu eliqhubekayo eceleni kwesigaba sokukhukhumeza. Intuthuko ingase iqale ukuqhuma futhi ngezikhathi ezithile imise ngesikhathi esithile phakathi nomjikelezo wabantu abaningi. I-Proviron izoba nenzuzo enkulu kuleli phuzu ngoba ikhulisa inkululeko yamanye ama-steroids afakwe emgqeni ngaleyo ndlela ikhulise izinga labo lomsebenzi.
Abagqugquzeli bomzimba abanomncintiswano basebenzisa imithi emikhulu ye-testosterone ngesikhathi sokujikeleza, kodwa ngokuvamile, isilinganiso sinciphile phakathi nalesi sigaba uma kuqhathaniswa nomjikelezo we-off-season. Kodwa-ke, abanye abasebenzisi bakhetha ukuthatha inani elilinganiselwe lobufakazi be-testosterone ngenkathi yomjikelezo ngezizathu ezithile zomuntu siqu. I-Mesterolone ifinyeleleka esimweni esinjalo ngoba inikeza ukukhuthazwa kwe-androgen okudingekayo. Lokhu kungase kuthathwe njengokungadingekile, kodwa kuyasiza kakhulu.
Ukusika isigaba inzuzo
I-Mesterolone emifushane isetshenziswe kangcono, ngabakhi bomzimba, ngesikhathi sokujikeleza. Phakathi nalesi sigaba, kubonisa izici ezinzima ezifana nezokwa-Masteron. Nakuba, inzuzo yayo ebaluleke kakhulu yikhono layo lokukhulisa ukusebenza kanzima kwamanye ama-steroids afakwe emgqeni. I-Proviron ibophezela kakhulu kumamukeli we-androgen okuvumela umsebenzisi ukuthi ashise amafutha omzimba ngokushesha nangokusebenza kahle. Uma sicabangela imiphumela ye-Proviron yokulwa-estrogenic, abasebenzisi bazobhekana nokugcina amanzi amancane, kanti mhlawumbe ngeke kube nesidingo sokufaka i-anti-estrogen yendabuko emgqeni. Futhi, i-Proviron yandisa inani le-testosterone yamahhala. Lokhu kuyisizo esikhulu kusukela amazinga e-testosterone ngokuvamile ephansi phakathi nalesi sikhathi se-anabolic steroid ukusetshenziswa. Imiphumela izoba ngaphezulu kubantu abafaka i-Proviron uma kunamanani aphansi e-testosterone kuqhathaniswa nabasebenzisi abangenayo. Ngokusobala, inzuzo ebalulekile ye-mesterolone phakathi nomjikelezo wokusika yikhono layo lokuthuthukisa i-androgenicity yamanye ama-steroid afakwe emgqeni ngenhloso yokuqina ngokomzimba. Imiphumela ye Isilinganiso se-Proviron kungaphawulwa kuphela uma umsebenzisi encike.
Njengoba kuxoxwe ngaphambili, i-Mesterolone (i-Proviron) isuka ku-DHT. Lokhu kusho ukuthi ukusetshenziswa kwayo akulethi noma yimiphi imiphumela yecala yes estrogenic. Uma kuqhathaniswa namanye amaphilisi e-anti-estrogen, isibonelo, i-Nolvadex, i-Proviron nakuba ingenamandla kakhulu, iyisivijithali esivimba kakhulu se-estrogen. Ukwenza kucace, i-Proviron igwema ukukhiqizwa kwe-estrogen ngenkathi ezinye amaphilisi zivimbela kakade i-estrogen ekhiqizwa emzimbeni. Ama-Bodybuilders ane-estrogen ezwelayo kufanele asebenzise i-Proviron eceleni kwamanye ama-steroids. Izidakamizwa ze-Estrogenic ezibangelwa ezinye i-steroids ziyancishiswa yi-Proviron uma zifakwa emgqeni. Ngenxa yesici sayo se-anti-isrogen, i-Proviron manje isetshenziselwa umkhakha wezokwelapha ukuphatha umdlavuza webele kanye ne-gynecomastia.
I-Proviron steroid, njengamanye DHT etholakala, idlala indima ebalulekile ekulahlekelweni kwamafutha emzimbeni. Ikhuthaza ukwehla kwamafutha egcinwe emzimbeni abe ngamandla asetshenziswa emisebenzini yansuku zonke. Ngokuphindaphindiwe, izinga le-lipid emzimbeni linciphile. Ukunciphisa amazinga e-lipid kubangelwa amazinga we-androgen enyuka ngenxa yokusetshenziswa kwe-Proviron. Yingakho i-Mesterolone isebenza kahle ngesikhathi sokusika imijikelezo.
Ukusetshenziswa kwe-steroid kungaba nzima kakhulu uma abasebenzisi kudingeka babhekane nokunambitheka nemiphumela elandelayo. Lena inqubo lapho isifo se-testosterone emzimbeni noma lokho okuphathwe nge-steroids kuguqulwa sibe yi-estrogen. Imiphumela elandelayo ihlanganisa ukugcinwa kwamanzi, ukuzuza kwesisindo, i-gynecomastia, ukushintshashintsha kwe-hormonal phakathi kwabanye. I-Estrogen iphinde ikhuthaze ukukhiqizwa kwe-anti-anabolic stress hormone, eyaziwa ngokuthi i-cortisol.
Izindaba ezinhle ukuthi i-Proviron ayifuni. Kuvimbela le nqubo eyingozi ngokuzibophezela ku-enzyme ekhuthaza ukunambitheka. Ngakho-ke i-Proviron ivimbela imisebenzi ye-estrogenic ngakho-ke ihlinzeka ngokuvikelwa emiphumeleni emibi eyenziwe yilezi zenzo.
Ithuthukisa umsebenzi wezinye i-steroids
Ukuthola imiphumela ephezulu, izici zomzimba zifaka i-anabolic ne-androgenic steroid ngeProviron steroid. Okokuqala, njengoba kushiwo ngaphambili, kuvimbela imiphumela emibi ye-estrogenic. Okwesibili, i-Proviron idlala indima yokubangela ezinye i-steroids ezenza ziphumelele ngokwengeziwe. Kungakwenza lokhu ngoba ibophezela kumamkeli we-androgen ohlelweni lomzimba. Ngokuhamba kwesikhathi, wonke ama-steroids afakwe esitokisini abe esebenzayo. Isibonelo uma sisetshenziselwa kanye Anavar noma i-Androlic Steroid.
Kunciphisa i-glomin ebophayo ye-hormone (SHBG)
I-sex hormone ebopha i-globulin ibopha ubufakazi obukhona be-testosterone emzimbeni ukunciphisa inani le-testosterone yamahhala. I-Proviron inezinhlangothi eziphezulu ezibophayo kule hormone, ngakho-ke iyinciphisa, okwenza kube nenani elikhulayo le-testosterone yamahhala. I-testosterone yamahhala ikhuthaza imisipha ekwakheni ngesikhathi sokunyakaza nokusika imijikelezo. Abantu abafaka i-Proviron emgqeni wabo wokujikeleza bayoba nemiphumela emihle nakakhulu.
Ilungisa ukungabi namuntu wesilisa
I-Mesterolone 1424-00-6 iyimithi efanelekayo yendoda engaphansi kokuzala noma isimo sengqondo sokungabi namandla. Kwamacala amaningi, le nkinga ihanjiswa ngamazinga aphansi okukhiqizwa kwesidoda. Nakuba imininingwane ephathelene nokungazalwa komuntu nokuzala ingacaci, kukholelwa ukuthi ukukhiqiza umdlwane kuxhomeke kuma-gonadotrophins kanye ne-androgens, isibonelo, i-testosterone. La mahomoni anesizathu sokugqugquzela izitho zocansi. Ngakolunye uhlangothi, i-Proviron ivuselela i-androgens kodwa ayithinti ama-gonadotrophins. Lokhu kuhumusha ekugculiseni isibalo se-proviron sokukhuthaza ukuzala.
Ilungele ukulungiselela umncintiswano
U-Proviron ungumngane ophelele lapho elungiselela umncintiswano. Kuyasiza ekugcineni amandla, ukuthuthukisa ukubonakala kwemisipha nokugcina ubukhulu besisindo phakathi nesikhathi sokulungiselela umncintiswano. Abaningi bomzimba balisebenzisile i-Proviron yokusika nokukhwabanisa ngoba kwandisa amazinga we-androgen ngenkathi kunciphisa amazinga e-estrogen. Ngokuhamba kwesikhathi, abasebenzisi bajabulela izinzuzo ze-androgenic ezifana nomkhiqizo wamandla amakhulu kanye nemiphumela yokushisa fat ngenkathi ukugcinwa kwamanzi kunciphisa.
Uphatha ukungabi namandla
Njengoba kuxoxwe ngaphambili, i-Proviron iqinisa ubufakazi be-testosterone. Ngokuphindaphindiwe, i-testosterone ikhulula izimpawu zokuntuleka, okuyaziwa nangokuthi, ukukhubazeka kwe-erectile. Futhi ngokumangalisa kunezela libido; lokhu isizathu esanele kunoma yikuphi umakhi womzimba ukuze uyifake esitokisini.
Ayikho injection ye-mesterolone
Umcabango wokusebenzisa inaliti esikhumbeni kungase kudambise abaqashi bomzimba ekusebenziseni i-steroid. Ngenhlanhla, i-Proviron ithathwa ngomlomo, ngendlela efanayo ongayithatha ukukhulula ubuhlungu. Uma uhlobo oluzonda izinaliti, khona-ke i-Proviron kufanele ikhethe wena ungakhohlwa enye inzuzo yomzimba okufanele inikele yona.
Inzuzo ephikisana nokucindezela
Esinye sezivivinyo zezokwelapha ezenziwe nge-mesterolone kubonise ukuthi le steroid ingcono kangcono isimo sengqondo sabasebenzisi abathile ababhekene nokucindezeleka. Lokhu kuye kwaheha ukusetshenziswa phakathi kwabantu ababhekene nalesi simo. Ngokwesayensi, imiphumela yokuhlolwa ayizange igcizeleleke kusukela ukubonwa okufanayo kwenzelwa iqembu lokulawula i-placebo. I-Proviron inezimo eziphezulu ze-androgenic ngaleyo ndlela ingakwandisa ukungalingani kwe-hormonal nokusebenza kobulili besilisa. Ngokufanayo, i-Proviron ithuthukisa umuzwa wenhlalakahle, ukuzethemba futhi ithuthukise isimo sengqondo esihle nokuhle kumuntu owenza umzimba.
I-Raw Proviron (Mesterolone) Isilinganiso
I-Mesterolone, i-steroid ye-anabolic engcono kakhulu yomlomo, isetshenziswe ngezindlela ezimbili ezahlukene; ngenhloso yokwelashwa ukuphatha ukugula okuthile kanye nokwakha umzimba. Izinzuzo ze-Proviron ziningi kepha zingathokozeka kuphela uma izilinganiso ezifanele zinikezwa. Amanani aphakanyiselwe injongo ngayinye azoxoxwa ngezansi.
Ithebulethi ye-25mg kufanele ithathwe kathathu ngosuku ukuphatha amandla nokunciphisa izici zesondo zocansi zesilisa. Isilinganiso esiphelele kufanele sibe ngu-75mg ngosuku. Lesi sifo siphethwe ngezigaba zokuqala zokwelapha. Isilinganiso sinciphisa i-25 mg tablet once kanye nosuku. Umthamo ofanayo we-Proviron usetshenziselwa ukuphatha ukungasebenzi komuntu. Ezinye izidakamizwa zisetshenziselwa kanye neProviron ukufeza imiphumela emihle kakhulu.
Abakhi bomzimba abakhuthaza ukusebenza basebenzisa umthamo we-50mg kuya ku-150mg nsuku zonke. Ngokusho kocwaningo, i-Proviron isigamu sokuphila kwamabanga phakathi kwe-12 kuya kumahora we-13. Inhloso eyinhloko yalesi sifo ukunciphisa amazinga okugcinwa kwamanzi, ikakhulukazi obangelwa i-estrogen. Futhi, lokhu kulinganiswa kuqinisekisa ukuthi izinga le-testosterone emzimbeni womzimba liyadingeka ukuvimbela noma yikuphi amathuba okungazalwa emva komjikelezo. Ezimweni eziningi, amadoda azosebenzisa i-100mg ngosuku njengenani elincane. Kodwa-ke, kokubili amanani e-150mg ne-100mg nsuku zonke azoba nenzuzo enkulu ngokulinganayo. Ukuphathwa kwesilinganiso se-proviron kuqhubeka ngokujwayelekile amasonto ayisishiyagalombili kuya kwayishumi nambili. Ukuze unqobe iphuzu lokunamathela elitholakala kakhulu emavikini okugcina omjikelezo, amaviki ayisithupha amaProviron izosebenza ngomlingo.
Abasebenzisi besifazane abathintekayo emidlalweni enamandla sebenzisa i-Proviron. Noma kunjalo, ukusetshenziswa kwabo ngabesifazane kuyadangalisa kakhulu. Uma kwenzeka owesifazane enquma ukuyisebenzisa, umthamo we-25mg ngosuku kufanele ube ngokwanele ukuthuthukisa ukubonakala kwemisipha. Ukudla akufanele kudlule amasonto amane kuya kwahlanu ngaphandle kwalokho umsebenzisi uzobhekana nemiphumela emibi ye-virilization. I-Proviron nokukhulelwa akuhambisani. Abomama abakhulelwe nabahlengikazi kufanele baqhubeke nalesi sidakamizwa.
Uma uhlela ukusebenzisa i-Proviron, ukuyibeka ngezinye i-steroids kuzokusiza kakhulu kunokulimaza. Ama-Mesterolone nawo afuna i-Winstrol, i-Androlic, i-Primobolan, i-Anavar ne-Masteron, esebenza kahle nalesi sidakamizwa ngesikhathi sokusika. Ikhuthaza i-androgenicity ye-steroids esetshenziswe emgqeni ukuze inikeze umzimba obunzima oyifunayo. Abanye abasebenzisi bangayifaka emjikelezweni wokukhwehlela uma kubonakala kuwusizo kubo.
Ayikho imibiko kuze kube manje emiphumeleni emibi eyabangelwa ukudlula okuningi kwe-Proviron steroid phakathi nemijikelezo noma uma isebenza nge-amesterolone I-PCT. Kodwa-ke, ukusetshenziswa okungenamkhawulo kwe-androgens kulandela ukulimala okunomthelela omkhulu njengesifo senhliziyo, ukuphazamiseka kwengqondo, ukuphazamiseka kwengqondo, i-gynecomastia, izinkinga zesibindi, ukunciphisa kwe-glucose ukubekezelelana, ukulimala kwe-tendon, ukuhoxiswa kwesifo, i-hypogonadal kanye nokuphuma kwamathumbu emathunjini. Ukuhlolwa komtholampilo kufanele kwenziwe kubantu ngabanye ukuze banqume ukwelashwa okuyisimangaliso okufanele kusetshenziswe. Abasebenzisi kufanele babe nolwazi olwanele lapho ukuthatha i-Proviron kanye nemingcele okufanele isetshenziselwe ukugwema ukukhipha ngaphezulu.
Umjikelezo we-Proviron (mesterolone)
Uma sicabanga ukuthi i-Proviron ayiyona i-steroid yama-anabolic, noma kunalokho inezici ze-anabolic ezinamahloni, ayikwazi ukuhamba ngebhayisikili yodwa. Esikhundleni salokho, sisetshenziselwa eceleni kwamanye ama-anabolic steroids, njengesidakamizwa esisekelayo, ukunciphisa imiphumela ye-estrogenic emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, kufakwe emgodini wemiphumela yayo yokulwa ne-estrogen nemiphumela emihle yokuthuthukisa i-physique enzima. Ukuba i-androgen eqinile futhi kuyisizathu esenza ukuthi umzimba womuntu uyithande.
Abazimele bomzimba nabadlali abasebenzisa i-Proviron njenge-compound ehambisanayo bathatha isilinganiso se-50mg kuya ku-100mg nsuku zonke kulo lonke umjikelezo. Kuleli qophelo, ayikho imingcele esikhathini esithathwe ngaso. I-Proviron PCT ingase isebenze nakwamanye ama-bodybuilders. Benza kanjalo ukunciphisa amazinga e-estrogen nokuthuthukisa ukuzala. Njengoba lokhu kungesona isinqumo esibi, kunezinye izidakamizwa ezisebenzayo ezinemiphumela enamandla engasetshenziswa ngesikhathi se-PCT njenge-Nolvadex. I-Proviron kufanele igwenywe ngazo zonke izindleko uma kunengozi yokunciphisa ukukhiqizwa kwe-testosterone engapheli emzimbeni.
Imijikelezo engezansi kufanele ikunikeze okushiwo yilokho okulindelwe.
Umjikelezo we-Raw Proviron (mesterolone) 1
Iviki I-Proviron Dianabol
1 50mg ngosuku 40mg ngosuku
2 50mg ngosuku 40mg ngosuku
3 50mg ngosuku 40mg ngosuku
4 50mg ngosuku 40mg ngosuku
5 50mg ngosuku 40mg ngosuku
6 50mg ngosuku 40mg ngosuku
7 50mg ngosuku 40mg ngosuku
8 Usuku lwe-50mgper 40mg ngosuku
Umjikelezo we-Raw Proviron (mesterolone) 2
Iviki I-Proviron Anavar
1 40mg / usuku 40mg / usuku
2 40mg / usuku 60mg / usuku
3 60mg / usuku 80mg / usuku
4 60mg / usuku 80mg / usuku
5 60mg / usuku 80mg / usuku
I-Raw Proviron (i-mesterolone) Imiphumela engezansi
I-Proviron yi-steroid ephephile uma iqhathaniswa namanye ama-anabolic kanye ne-androgenic steroids. Abakhi bomzimba bangasebenzisa le steroid futhi bajabulele izinzuzo zayo ngaphandle kokubhekana nanoma yimiphi imiphumela emibi engalindeleki. Imiphumela embalwa emibi ingase ihlangane, kodwa kungenzeka ukuthi iphansi. I-Proviron yabesifazane ayinconywa kusukela amazinga wokuphila aphakeme ngemuva kokusetshenziswa. Imiphumela emibi engaba khona ye-mesterolone ixoxwa ngezansi.
Imiphumela ejwayelekile ye-proviron emibi ihlanganisa;
Amazinga aphakeme aphezulu noma aphansi
Idrayivu yezocansi esheshayo
Isayizi sebele lesanda
Imiphumela emibi ye-proviron;
Usayizi we-prostate wanda
Lemiphumela emibi ye-Proviron ingase ibe yimbi nakakhulu uma umsebenzisi ethatha i-mesterolone engcolile noma ephethe amanani amaningi ngokweqile. Ukuze ugweme le ngozi, abasebenzisi kufanele bazi ukuthi kufanele bathathe nini i-Proviron kanye nemali efanele.
Is I-Proviron yomthetho?
Imithetho, imithetho nemithethonqubo ephathelene ne-steroids ihluke phakathi kwezifunda namazwe. Njengoba i-mesterolone (i-Proviron) engekho, ngokwesayensi, i-anabolic steroid ngenxa yemiphumela yayo encane ye-anabolic, kubhekwa futhi kubhaliswe njenge-anabolic steroid emazweni athile kanjalo ngokomthetho. I-Proviron ivame emazweni amathathu aseNtshonalanga; i-United States, i-United Kingdom ne-Canada.
E-United States, i-Raw mesterolone ihlelwe njengento yeSheduli 111 ngaphansi koMthetho Wokulawulwa Kwezinto. Kulesi simo, akuvumelekile ukuba nefa noma usebenzise i-Proviron kule ndawo. Ukungenisa, ukuthenga noma ukuhweba kwe-anabolic steroids, i-Proviron efakiwe, kuthathwa njengesenzo sobugebengu.
E-United Kingdom (eNgilandi), i-Proviron ithathwa njengesidakamizwa seSheduli IV. Ukutholakala nokusetshenziswa kweProviron ngezidingo zomuntu siqu kungokomthetho kuleli zwe. Ukungenisa leli steroid akuyona ubugebengu basezakhamuzi zase-UK.
E-Canada, i-Proviron ibhaliswe ngaphansi koHlelo IV, njengase-UK. Lokhu kusho ukuthi ukutholakala nokuthengwa kwalesi sakhi kungokomthetho. Ukuthengiswa kwe-Proviron kuvunyelwe futhi kubhekwa njengecala. Lezo zimoto ezithintekayo Proviron zikhokha imali eyi-$ 1000 kanye / noma izinyanga eziyisithupha ejele ngenxa yobugebengu bokuqala. Labo abenza ubugebengu obulandela bakhokhela ku-$ 2000 amahle kanye / noma ukuboshwa unyaka owodwa. Le mithetho ichazwe kuMthetho weCrada Controlled Drugs and Substance Act (CDSA).
I-Mesterolone edayiswa ku-intanethi
Indlela elula futhi eshibhile yokuthenga i-proviron ingena nge-intanethi ngokusho kubasebenzisi abaningi. Ukuthenga kusuka kubathengisi bendawo kuzokubiza ngaphezulu. Abathengisi abaningi be-gym abayithwali izidakamizwa noma banakho ngobuncane. Abahlinzeki abaningi be-intanethi bane-Proviron noma ifomu layo ngobuningi. Amathuba okufika kumathekisthi e-inthanethi aphakeme ngokukhethekile uma ufuna uphawu lomkhiqizo wangaphansi komhlaba. Noma kunjalo, lokhu akumelwe kube njalo uma uhlola isambulelo sakho kumphakeli wakho. Njengoba kunomthetho omkhulu we-Schering Proviron emakethe, bekungeke kube nesizathu sokuthenga brand brand.
Ukuthenga i-Proviron ku-intanethi kungabonakala kuyindlela elula yokuthola lesi sidakamizwa, kodwa kunezingozi ezihilelekile. Njengoba i-Proviron yisidakamizwa seSheduli e-United States, ukuyithenga ku-intanethi kuzophula umthetho. Lokhu kulandela izinhlawulo ezinzima noma ngisho nokuboshwa. Abasebenzisi bangathenga ngokomthetho lesi sidakamizwa kuphela uma benemithi. Ukuthi umuthi odokotela kufanele uvunyelwe kanjani ngemithi, ulungile futhi waziwa nguhulumeni. Amanye amazwe anemithetho efanayo, nakuba i-US yinto enzima emithethweni. Amanye amazwe alula kodwa aqinile kakhulu nangokuthengiswa kwe-inthanethi ye-anabolic steroids. Okungathi u-Proviron yi-steroid e-anabolic ephephile kakhulu, i-FDA ayihambisanga ngokusemthethweni ukusetshenziswa kwayo e-United States.
Indlela yokuthenga i-Proviron
I-Proviron ayitholakali kakhulu ezimakethe uma kuqhathaniswa nezinye izinsiza, ama-anabolic steroids noma ama-compounds. Kodwa kubhekwe njengento edingekayo okufanele itholakale kalula emakethe. Inani elikhulu kunawo wonke lala ma-mesterolone aluhlaza lenziwa yi-schering pharmaceuticals. Ngenxa yemvelo nesakhiwo se-Proviron, kunzima ukukhiqiza amanga. Lokhu akusho ukuthi abasebenzisi akufanele baqaphele lapho bethenga. Akuzona zonke I-Proviron ethengiswayo isikhangiso kufanele sithembeke.
Ngaphandle kwemikhiqizo ekhiqizwa izinkampani zokwelapha, zikhona lezo ezakhiwa ngamabhodlela angaphansi komhlaba. Lezi laboratories ezingaphansi komhlaba azigunyaziwe, zihlolwe noma zilayisensi. Ngamafuphi, asebenza ngokungemthetho. I-Proviron I-SARM ingenye yamakhemikhali akhiqizwa ngamakhambi amakhulu angaphansi komhlaba awaziwa yiziningi. Amakhambi amancane angaphansi komhlaba akwenzi lo mkhakha ngoba awuvamile. Esikhundleni salokho, bakhetha ukukhiqiza amanye ama-anabolic steroids athandwayo nezinsiza.
Ngokuvamile, i-Proviron ayinayo imali kakhulu, futhi ngezinga elithile, ingatholakala kalula. Ukuthengwa ezinkampanini zemithi kuyabiza kakhulu kunokuthenga okuvela kubaphakeli abangaphansi komhlaba. Kodwa-ke, yilokho okwenzayo yonke imikhiqizo ye-Underground lab (UGL) ngokuhambisana nezinto ezenziwe ngemithi. Isibonelo, i-Schering ithengisa i-25mg Proviron ku-$ 0.83; Ezinye izinkampani zokwelapha zithengisa nge $ 0.75. I-lab yangaphansi komhlaba (I-UGL); Ngakolunye uhlangothi, uthengisa i-25mg Proviron ye $ 0.50.ngokuthi, amalebhu angaphansi komhlaba angase akhiqize ama-proviron ekukhulumeni okuhlukile njengo-100mg, 50mg, 25mg noma ngisho ne-20mg. Ikhwalithi yezinto eziningi ezakhiwe ngaphansi komhlaba yinto engabaza ngakho-ke ukufanisa amanani nempahla yokwelapha ayikho logic.
Ukuthola ukuthengwa okunokwethenjelwa okuthengisa i-Proviron esemthethweni kungase kube yinye isikhathi kube umsebenzi onzima. I-Proviron yokudayiswa noma i-mesterolone yokukhangisa okuthengiswa kuyo yonke indawo ku-intanethi. Abasebenzisi akufanele bathenge noma yimuphi umkhiqizo ngaphandle kokwenza isheke sangemuva somphakeli. Noma kunjalo, ungakwazi ukuthenga kalula i-Proviron ku-intanethi kusuka emakethe yethu. E-Steroid.com, sinikeza ama-anabolics angokomthetho atholakala ngokomthetho ngaphandle kwemithi. Izintengo zethu zingabizi futhi zifananise nekhwalithi yemikhiqizo yethu. Uzozizwa ukhululekile uma uthengisa i-Proviron kithi kusukela siqhuba ibhizinisi elibonakalayo nelomthetho. Abantu be-Mesterolone nabo bafuna ezinye i-anabolic steroids, esiyihlinzeka ngokusemthethweni.
I-Proviron kungenzeka ingabi namandla njengamanye ama-anabolic steroids, kodwa izinzuzo zayo zibonakala ekupheleni kwemijikelezo. Ngiyisebenzise emigqeni yami yokusika futhi ngilungiselela umncintiswano. Kuze kube manje konke kuye kwaba kuhle, akukho ukukhononda. Ngaphambi kokuba ngithole le steroid, nginezinkinga ngamazinga e-testosterone emzimbeni wami futhi ngadingeka ngithathe amanani amaningi we-testosterone engapheli. Njengoba manje ngifake iProviron Bayer emgqeni wami, ngisebenzisa kuphela amancane amancane e-testosterone engapheli futhi ngezinye izikhathi akekho. Ngiyathanda ukuthi le steroid ingisiza ukuba ngilondoloze imisipha emihle ekwakheni imijikelezo yami yokunyakaza. Abaningi bomzimba abazinaki imiphumela yabo, angikwazi ukuyifaka emgqeni wami. Le steroid ingcono kunezinye i-SARM engizisebenzise esikhathini esidlule. Eqinisweni, ngidinga ukubhekana nokuphathwa kwekhanda elilodwa ngesikhathi esisodwa. Ukuzizwa kwami ​​nokuzwa inhlalakahle kuye kwashintsha kakhulu.
Iyini i-proviron? Iningi labantu bacabanga ukuthi i-proviron (i-1424-00-6) iyisimo steroid ebuthakathaka. Mhlawumbe ngenxa yokuthi abaziqondi i-hormone noma abangayisebenzisi ngendlela efanele, ngeke ubone inguquko yemilingo ngokushesha ukujikeleza le steroid, kodwa imiphumela yayo ihamba kancane kodwa iqinisekile; ikakhulukazi lapho kuhamba imijikelezo. Kuyinto eyingqayizivele futhi ekhethekile ngoba abasebenzisi abahlukunyezwa nemiphumela emibi lapho besebenzisa ezinye i-anabolic steroids. Ukuthola i-masterone (Proviron) ngokomthetho ngaphandle kwemithi kungenzeka. Abathengi bangayithola ku-Steroid.com ngamanani atholakalayo ephaketheni.
1 i-alpha-mythyl-17 i-beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-eyodwa
Isayensi ye-molecular formula: C2OH3202
Isisindo se-proviron ye-molecule: i-304.4716
Umkhiqizi wezokwelapha: Ukukhwabanisa
Iphuzu lokuqhafaza i-molecule: Akunakusebenza
I-Proviron yokuphila kwengxenye: Amahora we-12-13
Idethi ekhishwe: 1960
Amanani aphakanyisiwe: 25mgs kuya ku-200mgs nsuku zonke
Ukulinganisa kwe-Androgenic / Anabolic: 30-40: 100-150
Isikhathi sokuthola: amaviki ayisihlanu kuya kwayisithupha
Imiphumela ye-Proviron Isithombe
AJ, SL, & AA, OA (2009). I-Mesterolone (Proviron) iveza ikhwalithi ye-sperm ephansi ngokunciphisa iphrofayli ye-sex hormone kumuntu omdala wesilisa u-Sprague Dawley rats testis. Ucwaningo lwezesayensi kanye nemihlahlandlela, 4(4), i-320-327.
Imifula, MA, nokuqukethwe, i-U. UK Muscle Bodybuilding Forum.
Casquero, AC, Berti, JA, Teixeira, LLS, & de Oliveira, i-HCF (2017). Ukuzivocavoca okungapheliko kwehlisa i-CETP ne-Mesterolone Treatment Counteracts Izinzuzo zokuzivocavoca nge-Plasma Lipoproteins Profile: Ucwaningo kuma-Pig Transgenic. Lipids, 52(12), i-981-990.
Izinzuzo eziphezulu ze-15 Winstrol Okudingeka Uyazi Ngaphambi Kokuthenga i-Winstrol Online I-Isotretinoin emnyama (i-Accutane) yezinkuni: Ukuphatha i-Acne ne-Isotretinoin